ဒီ အကြောင်း ၁၀ ချက်နဲ့ ကိုက်ညီရင် သူမကို သင်တကယ် ချစ်နေတာပါ | Buzzy
ဒီ အကြောင်း ၁၀ ချက်နဲ့ ကိုက်ညီရင် သူမကို သင်တကယ် ချစ်နေတာပါ
သင် သူမကို တကယ်ချစ်မချစ် ဒီအချက်တွေနဲ့ ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ပါ
သင်ဟာ ရည်းစားဟောင်းတွေကို အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှု ရှိတိုင်း သတိရကောင်း သတိရနေပါလိမ့်မယ် ၊ ဒါပေမယ့် သူမကို တွေ့ပြီးနောက်ပိုင်း ရည်းစားဟောင်းတွေကို မေ့သွားပြီး အချိန်တိုင်း သူမအကြောင်းပဲ တွေးနေမိတယ် ၊ သူမအတွက်ပဲ စဉ်းစားနေမိတယ် ဆိုရင်တော့ .....
သငျဟာ ရညျးစားဟောငျးတှကေို အကွောငျးတိုကျဆိုငျမှု ရှိတိုငျး သတိရကောငျး သတိရနပေါလိမျ့မယျ ၊ ဒါပမေယျ့ သူမကို တှပွေီ့းနောကျပိုငျး ရညျးစားဟောငျးတှကေို မသှေ့ားပွီး အခြိနျတိုငျး သူမအကွောငျးပဲ တှေးနမေိတယျ ၊ သူမအတှကျပဲ စဉျးစားနမေိတယျ ဆိုရငျတော့ .....
သူမအကြောင်း မစဉ်းစားရရင် မနေနိုင်ဘူး
အမြဲတမ်း သူမအကြောင်းပဲ ခေါင်းထဲရောက်နေတယ် ၊ ဘာလေးစားစား သူမနဲ့သာ အတူတူစားရရင် ၊ ဘယ်လေးသွားသွား သူမနဲ့သာ အတူတူသွားရရင် ဆိုတာမျိုးတွေ ဖြစ်နေခဲ့ရင် ၊ သူမအပေါ် သင့်စွဲလန်းမှုက တကယ့်ကို အလွန်အကျွံပါပဲ ။ ရောဂါတကယ်ရင့်နေပါပြီ။
အမွဲတမျး သူမအကွောငျးပဲ ခေါငျးထဲရောကျနတေယျ ၊ ဘာလေးစားစား သူမနဲ့သာ အတူတူစားရရငျ ၊ ဘယျလေးသှားသှား သူမနဲ့သာ အတူတူသှားရရငျ ဆိုတာမြိုးတှေ ဖွဈနခေဲ့ရငျ ၊ သူမအပျေါ သငျ့စှဲလနျးမှုက တကယျ့ကို အလှနျအကြှံပါပဲ ။ ရောဂါတကယျရငျ့နပေါပွီ။
သင်က သူမကို တကယ်ချစ်တဲ့အတွက် သူမအပေါ် လူရော စိတ်ပါ ဂရုစိုက်မိတက်ပါတယ် ၊ သူမ စိတ်ထဲဝမ်းနည်းနေသလား သတိထားကြည့်မယ် ၊ ဝမ်းနည်းနေရင် နှစ်သိမ့်ပေးမယ် ၊ ပျော်ရွှင်အောင်ထားမယ် ။ အရာရာကို သူမနဲ့ မျှဝေဖို့ ကြိုးစားမယ်။
သငျက သူမကို တကယျခဈြတဲ့အတှကျ သူမအပျေါ လူရော စိတျပါ ဂရုစိုကျမိတကျပါတယျ ၊ သူမ စိတျထဲဝမျးနညျးနသေလား သတိထားကွညျ့မယျ ၊ ဝမျးနညျးနရေငျ နှဈသိမျ့ပေးမယျ ၊ ပြျောရှငျအောငျထားမယျ ။ အရာရာကို သူမနဲ့ မြှဝဖေို့ ကွိုးစားမယျ။
သူမရဲ. အမူအယာတွေကို သင်စွဲလန်းနေမယ်
သူမ ပြုမူသမျှ နဲ့ သူမ ပြောသမျှဟာ အခြားသူနဲ့ မတူပဲ သင်က နှစ်သက်နေမယ် ဆိုရင်တော့ သင်တကယ်ချစ်လို့ပါ ၊ သူမပြောသမျှ လုပ်သမျှကို လက်ညှိုးထိုး အပြစ်မတင်ရက်ဘူး ဆိုရင်တော့ သင့်အချစ်က ခိုင်သထက် ခိုင်နေတာပါပဲ။
သူမ ပွုမူသမြှ နဲ့ သူမ ပွောသမြှဟာ အခွားသူနဲ့ မတူပဲ သငျက နှဈသကျနမေယျ ဆိုရငျတော့ သငျတကယျခဈြလို့ပါ ၊ သူမပွောသမြှ လုပျသမြှကို လကျညှိုးထိုး အပွဈမတငျရကျဘူး ဆိုရငျတော့ သငျ့အခဈြက ခိုငျသထကျ ခိုငျနတောပါပဲ။
သင်နဲ့ သူမ အရာရာ တူနေမယ်
သင်မချစ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ စိတ်သဘောထားချင်း တိုက်ဆိုင်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူလှပါဘူး။ သင်တိုပနှစ်ယောက်က တစ်ခုခုကို ပြုလုပ်ဖို့ အတူတူ တွေးမိတာမျိုးဆိုရင် သင်တို့အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အမှတ်လက္ခဏာပါပဲ ။ စိတ်တူကိုယ်တူဆိုတာ ဘာပဲပြောပြော ကောင်းပါတယ်။
သငျမခဈြတဲ့ လူတဈယောကျယောကျနဲ့ စိတျသဘောထားခငျြး တိုကျဆိုငျဖို့ဆိုတာ မလှယျကူလှပါဘူး။ သငျတိုပနှဈယောကျက တဈခုခုကို ပွုလုပျဖို့ အတူတူ တှေးမိတာမြိုးဆိုရငျ သငျတို့အတှကျ ကောငျးမှနျတဲ့ အမှတျလက်ခဏာပါပဲ ။ စိတျတူကိုယျတူဆိုတာ ဘာပဲပွောပွော ကောငျးပါတယျ။
အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာ သူမနဲ့ အခြားမိန်းကလေးတွေ ရှိနေရင်တောင် သင်က သူမကိုပဲ သတိထားမိမယ် အခြားမိန်းကလေးတွေကို မမြင်နိုင်လောက်အောင် ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့....
အခနျးတဈခနျးထဲမှာ သူမနဲ့ အခွားမိနျးကလေးတှေ ရှိနရေငျတောငျ သငျက သူမကိုပဲ သတိထားမိမယျ အခွားမိနျးကလေးတှကေို မမွငျနိုငျလောကျအောငျ ဖွဈနပွေီဆိုရငျတော့....
သူမနဲ့ အချိန်တွေ ကုန်ဆုံးရတာကို နှစ်သက်တယ်
ဒါကတော့ ချစ်သူတော်တော်များများရဲ. စိတ်ထားပါပဲ ၊ သူမနဲ့ ရှိနေရင် ပိုပျော်တယ် ၊ အမြဲတမ်း အတူတူနေချင်တယ်။
ဒါကတော့ ခဈြသူတျောတျောမြားမြားရဲ. စိတျထားပါပဲ ၊ သူမနဲ့ ရှိနရေငျ ပိုပြျောတယျ ၊ အမွဲတမျး အတူတူနခေငျြတယျ။
သူမအပေါ် အလျှော့ပေး ဆက်ဆံတက်တယ်
သင့်အနေနဲ့ သူမအပေါ် အလေးထားပြီး စိတ်ချမ်းသာစေလိုတာမို့ သင်မနှစ်သက်တာကို သူမက ပြောဆိုလုပ်ကိုင် လာစေရင်တောင် အလျှော့ပေးတက်ပါတယ် ၊ သင်တို့နှစ်ယောက် အငြင်းအခုန်ဖြစ်ရင်လည်း သင်က လွယ်လွယ်နဲ့ သူမကို လိုက်လျှောပေးလိုက်မိတက်တာမျိုးပေါ့
သငျ့အနနေဲ့ သူမအပျေါ အလေးထားပွီး စိတျခမျြးသာစလေိုတာမို့ သငျမနှဈသကျတာကို သူမက ပွောဆိုလုပျကိုငျ လာစရေငျတောငျ အလြှော့ပေးတကျပါတယျ ၊ သငျတို့နှဈယောကျ အငွငျးအခုနျဖွဈရငျလညျး သငျက လှယျလှယျနဲ့ သူမကို လိုကျလြှောပေးလိုကျမိတကျတာမြိုးပေါ့
အရာရာထက် ပိုပြီး သူမကို ဦးစားပေးတယ်
သင်က သူငယ်ချင်းနဲ့ သူမဆို သူမကို ရွေးချယ်တာ ၊ ဘောလုံးပွဲကြည့်ဖို့ ထက် သူမနဲ့ တွေ့ဖို့ က ပိုအရေးပါနေတာ စသဖြင့်ပေါ့
သငျက သူငယျခငျြးနဲ့ သူမဆို သူမကို ရှေးခယျြတာ ၊ ဘောလုံးပှဲကွညျ့ဖို့ ထကျ သူမနဲ့ တှဖေို့ က ပိုအရေးပါနတော စသဖွငျ့ပေါ့
အနာဂတ် အကြောင်း စပြီးစဉ်းစားလာပြီ
သင်ဟာ တေတေပေပေ နေခဲ့ဖူးကောင်း နေခဲ့ပါလိမ့်မယ် ၊ သူမကို တွေ့ပြီးနောက်မှာတော့ ဘဝမှာ ဘာကိုတော့ မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်မယ် ဘယ်လိုကြိုးစားမယ် ၊ စသဖြင့်တွေ စဉ်းစားတွေးတော တက်လာပြီဆိုရင်တော့ သူမကို သင်တကယ်ချစ်နေလို့ပါ
သငျဟာ တတေပေပေေ နခေဲ့ဖူးကောငျး နခေဲ့ပါလိမျ့မယျ ၊ သူမကို တှပွေီ့းနောကျမှာတော့ ဘဝမှာ ဘာကိုတော့ မဖွဈဖွဈအောငျ လုပျမယျ ဘယျလိုကွိုးစားမယျ ၊ စသဖွငျ့တှေ စဉျးစားတှေးတော တကျလာပွီဆိုရငျတော့ သူမကို သငျတကယျခဈြနလေို့ပါ